မိဖုရား၏သတိပေးချက်: တော်ဝင်အကူအညီအထောက်အပံ့များကိုမင်းသားဟယ်ရီနှင့် Meghan Markle ဖော်ပြမဧည့်သည်များမေးပါ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် မိဖုရား၏ "သတိပေးချက်: တော်ဝင်အကူအညီအထောက်အပံ့များကိုမင်းသားဟယ်ရီနှင့် Meghan Markle ဖော်ပြမဧည့်သည်များမေးပါ
အဆိုပါ Duke နဲ့ Sussex ၏ Duchess မကြာသေးမီလများအတွင်းအငြင်းပွားစရာများ၏နံပါတ်များ၏အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြပြီးတော်ဝင်အရင်းအမြစ်နန်းတော်မှဧည့်သည်များသူတို့မိဖုရားဖြည့်ဆည်းရသောအခါသူတို့ကိုအကြောင်းပြောဆိုရန်မဟုတ်ပါသတိပေးခဲ့သည်နေကြသည်ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါအတွင်း Meghan ဟယ်ရီဆွေးနွေးရန်မဟုတ်အကြံပြုချက် 16 လအတွင်းအဲဒီမှာလက်ထပ်သူကဆက်ပြောသည်မဟုတ်ဘဲ "တာဝန်ရှိသူတဦးကမူဝါဒသည်" ထက် "အလွတ်သဘော" ဖြစ်ပါတယ်။
"သူတို့ကဟယ်ရီနှင့် Meghan နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးမဟုတ်ကြကြောင်းအကြံပြုသည်။ ယဉ်ကျေးစကားပြောဆိုမှုများ၏ဘာသာရပ်အဖြစ်ရွေးချယ်မှု။
တော်ဝင်အကူအညီဟယ်ရီနှင့် Meghan အကြောင်းကိုသူမ၏မေးရန်မဘုရင်မကြီးဖို့ဧည့်သည်များအကြံပြုခဲ့သည် (ရုပ်ပုံ: Getty)
အဆိုပါ Duke နဲ့ Sussex ၏ Duchess မကြာသေးမီလများအတွင်းအငြင်းပွားစရာများ၏နံပါတ်များ၏အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြ (ရုပ်ပုံ: Getty)
သို့သော်အခြားအငျတာဗြူးအရင်းအမြစ်) 1965, သတင်းစာဆရာ Quentin လက်တသူ Sussex ဟာဧကရာဇ်နှင့်အတူဆွေးနွေးရန်အဆင်သင့်မဟုတ်ခဲ့ကွောငျးကိုကွားခဲ့ကွောငျးသောကြာနေ့ Tweet လုပ်ခဲ့။
Read more: မွေးနေ့မင်းသားဟယ်ရီ: သူ 35 နှစ်ပေါင်းကျင်းပဘယ်လိုဟယ်ရီ?
တစ်ခုအတွင်း Meghan ဟယ်ရီဆွေးနွေးရန်မဟုတ်အကြံပြုချက်မဟုတ်ဘဲ "တာဝန်ရှိသူတဦးကမူဝါဒသည်" ထက် "အလွတ်သဘော" ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည် (ရုပ်ပုံ: Getty)
သူက "တစ်ဦးအသိအကျွမ်းများ၏တစ်ဦးကမိတ်ဆွေတစ် HMQ နှင့်အတူစီးနင်းသွားကြဖို့အကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ v လယ်ယာကောင်စီပေးထားခဲ့သည်။ "တစ်ဦးဘာသာရပ်ပေမယ့်ဘာမှအကြောင်းကိုပြောဆိုပါ။ " Brexit? '' အမှတ် အဆိုပါ Sussex ။ "
ဒါဟာသူ့အစီရင်ခံစာယခုလအစောပိုင်းကများ၏ကြေငြာချက်အပြီးထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Meghan သူမက "အင်တာနက်ကိုခြိုးဖောကျ" ကိုလိုခငျြ၎င်း၏အသစ်သောလူထုဆက်ဆံရေးကုမ္ပဏီ Sunshine ရုပ်ရှင် Sachs ကြေညာလိုက်ပါတယ်.
တော်ဝင်အစောင့်တဲ့: Meghan Markle နှင့်ဟယ်ရီ '' အန္တရာယ်ထေိုငျ '' [Insight]
တော်ဝင် Shock: ကိတ် Middleton မိဖုရားနှင့်အတူမျှဝေကြောင်းတစ်ခုတည်းသောအရာ [ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း]
Meghan Markle လုပ်ဖို့အလုပ်လုပ်နေဆဲရှိ၏ဟုပြောသည်။ အများပြည်သူအနိုင်ရ [VIDEO]
အဆိုပါသတင်းစာဆရာ Quentin လက်တသူ Sussex ဟာဧကရာဇ်နှင့်အတူဆွေးနွေးရန်အဆင်သင့်မဟုတ်ခဲ့ကွောငျးကိုကွားခဲ့ကွောငျး Tweet လုပ်ခဲ့ (ရုပ်ပုံ: Getty)  အသစ်ကတော်ဝင် "ခေါင်းစဉ် =" သစ်ကိုတော်ဝင်မိသားစု ">
အဆိုပါ Sussex မင်းသားဝီလျံနှင့်ကိတ်တို့အကြားတစ်ဦးကောလဟလ၏ကောလာဟလများအပါအဝင်အပျက်သဘောခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်တစ်ဦးစီးရီး, ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရ (ရုပ်ပုံ: Getty)
အဟောင်းမင်းသမီးသူမက Balmoral အတွက်မိဖုရားနှစ်စဉ်နွေရာသီအားလပ်ရက်မစစ်ကြောဘဲနေခဲ့ကြပေမယ့်သူမ၏မိတ်ဆွေတစ် Serena Williams ကအမေရိကန်ပွင့်လင်း၏နောက်ဆုံးတက်ရောက်ရန်ကြည့်ဖို့နောက်ဆုံးမိနစ်ခရီးစဉ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အဆိုပါ Sussex မင်းသားဝီလျံနှင့်ကိတ်, Meghan သောမတ်စ် Markle ၏အဘ, ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်၏အသုံးပြုမှုကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့တုံ့ပြန်မှုများနှင့်တစ်ဦးစွဲနှင့်အတူတစ်မိသားစုအငြင်းပွားမှုအကြားစိတ်တိုးပွားကောလာဟလများအပါအဝင်အပျက်သဘောခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်တစ်ဦးစီးရီးရင်ဆိုင်ရ
ဒါဟာသူတို့ရဲ့အသစ်ကအိမ်, Frogmore အိမ်တွင်း, 2,4 သန်းပေါင်တစ်ဘတ်ဂျက်နှင့်အတူပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်ထင်ရှားလာသောအခါဝေဖန်သူများကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Meghan နှင့်ဟယ်ရီသူတို့လက်ထပ်ခဲ့ကြသည့်အခါ? (Image: Leap)
သူတို့ Ibiza နှင့် Nice အတွက် 11 ရက်ပေါင်းလေးပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ကိုယူပြီးအဘို့မိုဃ်းသက်မုန်တိုင်းနှင့်ရင်ဆိုင်နေရစဉ်တွင်ဆာ Elton John အပါအဝင်နာမည်ကြီးတွေတဲ့အရေအတွက်က, ပုံမှန်တရားကိုဟောအများပြည်သူနေသော်လည်း, စုံတွဲ၏ကာကွယ်ရေးမှတဟုန်တည်းပြေး ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကယ်ဖို့။
ဟယ်ရီခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်အောင်သစ်တစ်ခုစီမံကိန်းတစ်ခုကိုဖွင့်ဖို့အမ်စတာဒမ်ကတိကဝတ်အတွက်ယခုလ "ဘယ်သူမှပြီးပြည့်စုံသောဖွင့်က" အခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။
ဤအတောအတွင်း Meghan နှင့်ဟယ်ရီကညီအစ်ကိုတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဇနီးအကြားတင်းမာမှုများနှင့် ပတ်သက်. ထင်ကြေးများကြားတွင်အဆိုပါ Duke နဲ့ကိန်းဘရစ် Duchess နှင့်အတူမတ်ေတာ၏တံတွေးထွေး။
နောက်တစ်ပတ်သူတို့ကလေး Archi အတူခရီးစဉ် 10 နေ့ရက်ကာလအဘို့အာဖရိကမှာကိုညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ် (ရုပ်ပုံ: Getty)
PHOTO ။ Helene Segara: သူမ၏ဖခင်၏သေသောနောက်, သူမင့်